Parade Float - uZigong waseHaiti Culture Co., Ltd
A edadayo liqonga ehonjisiweyo, mhlawumbi wakha phezu isithuthi njenge ilori okanye mfutho emva omnye, nto leyo isisahlulo kwimiju- ezininzi festive. Ezi flots zisetyenziswa iintlobo kwimisebenzi efana umxholo park esinazo, goverment celebrtion, iziganeko carnival.in traditonal, ndiyise ahonjiswe ngokupheleleyo iintyatyambo okanye ezinye izinto izityalo.
eYafo ngokuyidadisa zethu zenziwa kwi tradtional lantern workmanships alo, sebenzisa yesinyithi shap kwaye zibophe isibane Ngokukhokelwa kwisakhiwo intsimbi kunye amalaphu umbala kwi uhlobo surface.this le eYafo ayikwazi nje kuboniswa emini kodwa babe ezinika umdla zotyelelo e nobusuku .
Kwelinye icala, izinto ezininzi ezahlukeneyo yaye workmanships asebenzisa ngayo floats.we badla oludibanisa iimveliso animatronis enezikhanyiso womsebenzi eqingqiweyo fiberglass kwi eYafo, olu hlobo, ndiyise ukuzisa amava ezahlukeneyo kubatyeleli.
Idilesi: No.1818 Huichuan Road kwisithili entsha, uZigong, kwiphondo Sichuan
Ufuna ukwazi ngakumbi izibane zethu kunye animatronics, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.